Xiaomi Mi Note 2, ity no ho terminal lehibe vaovao | Androidsis
Miaraka amin'ny Google Pixel sy Pixel XL vaovao (izay hisolo ny faritra Nexus fantatra hatreto), ny Xiaomi Mi Note 2 dia iray amin'ireo terminal avo lenta andrasana indrindra amin'ity taona ity. Soa ihany, ireo famoahana samihafa izay niseho hatreto dia mamela antsika hahafantatra ny toetrany sy ny tombony azo avy aminy.
Ny terminal Xiaomi vaovao, izay andrasana hatramin'ny fotoana fohy, dia hiavaka amin'ny kalitaon'ny fitaovana ao aminy, ny heriny avo sy ny fahombiazany ary ny tsy ampoizina vaovao izay vao hainay vao haingana: kinova Pro miaraka amin'ny fahatsiarovana RAM 8 GB.
1 Ity no Xiaomi Mi Note 2 vaovao
1.1 Famaritana izay ho entin'ny Mi Note 2 vaovao
2 Xiaomi Mi Fanamarihana 2 Pro
Ity no Xiaomi Mi Note 2 vaovao
Iray volana lasa izay, ny orinasa sinoa Xiaomi dia nandefa ny Redmi Note 4. Ity fanavaozana ity dia fanavaozana faharoa an'ity faritra ity hatramin'ny nanombohan'ny Mi Note teny an-tsena, ka ny fanavaozana ity farany ity dia efa saika nilaina tokoa. Na izany aza, mangataka izany.
Ny tsaho sy ny fivoahana dia tsy mijanona amin'ny tamba-jotra, miaraka amin'ny daty mety hanombohana, ny mety ho fampiasa sy ny tombony, ary na ny vidiny mety. Tsy isalasalana fa Mi Note 2 an'ny Xiaomi dia iray amin'ireo fitaovana andrasana indrindra amin'ireo goavambe sinoa ary, araka ny fantatsika rehetra hatreto, mampanantena izy io fa ho terminal manaitra.
Famaritana izay ho entin'ny Mi Note 2 vaovao
Hatramin'ny volana aprily lasa teo dia fantatray ny sasany amin'ny antsipiriany lehibe momba ny Xiaomi Mi Note 2, toy ny:
Fampisehoana Quad HD 5,7-inch miaraka amina 3D Touch
Qualcomm Snapdragon 821/823 processeur.
Memory RAM avy amin'ny 4 ka hatramin'ny 6 GB miankina amin'ny maodely.
32, 64, 128, ary 256 GB fitehirizana anatiny.
Fakan-tsary 16 MP roa ambadika faharoa
Batterie 3.600 mAh misy rafitra famahana haingana
Tamin'ny fiandohan'ny volana, nisy famoahana vaovao nanambara fa ny Mi Note 2 dia hatsangana amin'ny 14 septambra, na izany aza, araka ny efa hitantsika dia tsy nitranga izany tamin'ny farany. Fotoana fohy taorian'izay, tafaporitsaka iray hafa nanondro ny faha-24 ho fotoana manan-danja. Ity daty farany ity dia toa azo inoana kokoa fa ny sary tafaporitsaka dia miseho, miseho fotsiny, ho toy ny teaser ofisialy avy amin'ilay orinasa mihitsy.
Ary na dia tonga aza io fotoana io, na tsia, misy famoahana vaovao manambara ny fisian'ny maodely Pro miaraka amin'ny fahaiza-manao izay mbola tsy hitantsika teo amin'ny fitaovana iray manana ireo toetra ireo.
Xiaomi Mi Fanamarihana 2 Pro
Araka ny hitantsika amin'ity sary manaraka ity, ny sary voasivana dia mifanitsy amin'ny a Xiaomi Mi Fanamarihana 2 Pro. Ity dia manondro fa ny orinasa, tahaka ny nataony tamin'ny taranaka voalohany amin'ity fitaovana ity, dia handefa ny kinova Pro azy. Ny tsy mazava dia hoe hanao izany aorian'ny fandefasana ny Mi Note 2, na raha hisafidy ny handefa ny terminal roa tonta miaraka aminy izy ireo, zavatra iray, raha jerena ny daty misy antsika, dia mety ho azo tanterahina kokoa, ary koa bebe kokoa tombony (ho avy ny krismasy…).
Ny zavatra hitantsika amin'ity sary voasivana ireo toetra anatiny ao amin'ny terminal ity dia manambara ny Xiaomi Mi Note 2 Pro izay hivoatra miaraka amin'ny rafitra fiasa vaovaon'i Google, Android 7.0 Nougat, voaravaka sy nohatsaraina noho io sosona namboarina io izay mampiavaka sy mitandrina izay MIUI 8.
Saingy tsy isalasalana fa ny tena nahasarika ny saintsika dia ny azy ireo Fahatsiarovana RAM 8 GB.
Rehefa toa nilamina ny tsena iray manontolo tao amin'ireo tarehimarika efatra ary nanomboka niroso nankany amin'ireo isa enina dia tonga i Xiaomi ary nampiditra fahatsiarovana RAM 8 GB tao amin'ny Mi Note 2 Pro, izay hahatonga azy io ho smartphone voalohany eny an-tsena misy RAM 8 GB.
Ary raha ampiantsika amin'io ilay processeur mahery Qualcomm Snapdragon 821, izay naneho ny valiny fa mahery sy mahomby kokoa noho ny Snapdragon 820 izy io, avy eo hahita fitaovana tena manaitra isika.
Mbola tsy fantatra ny daty namoahana azy. Ary ny amin'ny vidiny dia misy resaka momba ny $ 460.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Xiaomi Mi Note 2, ity no ho terminal lehibe vaovao